यो’नी किन चि’लाउँछ ! यस्ताे घरेलु उ’पचार ? हेर्नुहाेस – Jagaran Nepal
यो’नी किन चि’लाउँछ ! यस्ताे घरेलु उ’पचार ? हेर्नुहाेस
प्राय:सबैजसो महिलाहरु आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै क्ष’णमा यो’नी चिलाउने स’मस्याबाट गु’ज्रिएका हुन्छन्। कहिलेकाँहि यसो हुनु सामान्य भएपनि लामो समयसम्म चिलाइराख्नु वा बारम्बार चिलाइराख्नु भने राम्रो होइन। यो’नि चिलाउने स’मस्या धेरै कारणबाट हुन सक्छ । ती मध्ये प्रमुख कारण यो’नि राम्रोसँग सफा नगर्नाले यो सम’स्या उत्पन्न हुन जान्छ भने ज’थाभावि यौ’न स’म्बन्धबाट हुने यौ’न रो’गबाट पनि यो’नि चिलाउँछ ।
यो’नि चिलाउने कारणहरु
त’नाव : सुन्दा अचम्म लागेपनि यो सहि हो कि त’नावको कारणले गर्दा यो’नि चलाउँछ ।
यिस्ट सं’क्रमण : यो’निमा यिस्ट इन्फे’क्सनको कारणले पनि यो’नि चिलाउँछ । यिस्ट इन्फे’क्सन हुँदा यो’नि वरिपरि सेतो दहि जस्तो ढुसि जम्मा हुन थाल्दछ जसको कारण यो’नि चिलाउँछ ।
जथाभावि यौ’न सम्बन्ध रो’गसँग ल’ड्ने क्षमता कमि हुनाले वा म’धुमेहको बिरामीलाई यिस्ट इन्फेक्सन हुने सम्भवना हुन्छ । यिस्ट इन्फेक्सन भएको ठाँउमा रातो दाग देखा पर्न थाल्छ र त्यो ठाउँ सुख्खा भै चि’लाउन थाल्छ । -सुख्खा छाला- सुख्खा छाला भएको व्यक्तिमा पनि यो’नि चि’लाउने स’मस्या बढी हुन्छ । छालालाई आवश्यक पर्ने पर्याप्त पानीको अ’भावले गर्दा यो’नि वरिपरिको छाला सुख्खा हुन जान्छ र चि’लाउन थाल्छ ।
४, यौ’न संक्र’मण : धेरै जनासँग यौ’न स’म्पर्क गर्नाले यौ’न रो’ग लाग्ने मात्रै नभै योनि चि’लाउने स’मस्या पनि शुरु हुन सक्छ । यी बाहेक यो’निमा हुने सं’क्रमण, चो’टपटक, म’हिनावरी ब’न्द हुनु आदि जस्ता कारणहरुले गर्दा पनि यो’नि चि’लाउने सम’स्या हुन सक्छ ।
यो’नि चिलाउने स’म्सया छ भने निम्न घरेलु विधि अपनाएर यो सम’स्याबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ ।
१, सबैभन्दा पहिले त के कारणले गर्दा यो’नि चि’लाएको हो त्यो थाहा गर्नुहोस् । यदि धेरै जनासँग यौ’न स’म्पर्कले यो स’मस्या भएको हो भने सबै भन्दा पहिले त त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गर्नुहोस ।
२, कुनै रसायनिक पदर्थको प्रयोगबाट जस्तै पर्फुमको प्रयोगले भो भने सो प्रयोग ब’न्द गर्नुहोस ।३, बास्नादार तावेल वा बाथ टबमा नुहाउँदा भएको हो भने त्यसो गर्न छाड्नुहोस ।४, सुतिको पे’न्टि मात्र प्रयोग गर्नुहोस् र चिलाइ निको नभएसम्म राति सुत्दा पे’न्टि नलगाउनुहोस ।५, चिलाउन निको नभएसम्म यौ’न स’म्पर्क नराख्नुहोस । राख्नै परे क’न्डमको प्रयोग गर्नुहोस् ।६, यो’नि सुख्खा हुने स’मस्या छ भने यौ’न’ स’म्बन्ध राख्दा चिप्लो बनाउने जेलिको प्रयोग गर्नुहोस ।
यो’नीको दश रोचक त’थ्य
यौ’नको विषय मानिसको सर्वाधिक चासोको विषय भएतापनि समाजको यसको खुल्ला चर्चा वर्जित भएकाले आफ्नै यौ’नांगका बारेमा धेरै कुराहरु मानिसलाई थाहा नहुन सक्छ ।
महिला गु’प्तांग निकै सं’वेदनशील तथा महत्वपूर्ण अं’ग हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । स’म्भोगको स’न्तुष्टि देखि, ग’र्भाधान र सन्तान पैदा गराउने मार्गको रुपमा रहेको यो अं’गका विषयमा केही अ’नौठा तथ्यहरु भने थाहा नहुनसक्छ ।
यो’नी बारेका १० रोचक तथ्य
-यो’नीको औषत आकार ३—४ इन्च हुन्छ, तर सम्भोगको चर’मोत्कर्षका बेला यसको आ’कार २ सय प्रतिशत सम्म वृ’द्धि हुनसक्छ ।-यो’नीको उत्ते’जक भाग अर्थात् भंगा’कुरमा ८ हजार वटा स्नायु हुन्छन्, जबकी पुरुषको लिं’गमा केवल चार हजार वटा मात्र ।
एक घण्टाको समय भित्रमा एक जना महिलाले अधिकतम १ सय ३४ पटकसम्म च’रम स’न्तुष्टि पाएको रेकर्ड छ । तर पुरुषको हकमा भने एक घण्टाको अवधिमा बढिमा १६ पटक सम्म मात्र चरम स’न्तुष्टि प्राप्त भएको रेकर्ड छ ।
-यो’नीमा आफ्नो सफाइ आफै गर्ने प्र’णाली हुन्छ ।-यो’नीमा प्राकृतिक लु’ब्रिकेन्ट स्क्वालिन हुन्छ । यो लु’ब्रिकेन्ट सार्क माछामा पनि पाइन्छ ।-गु’प्तांगको भित्री भित्ता अन्य अवस्थामा मुज्जा परेर रहेको हुन्छ र स’म्भोगको बेला उक्त भित्ता छाता जस्तै गरि फुक्दछ ।-यो’नीमा कैयन् प्रकारका ब्या’क्टेरिया पाइन्छन् । यो’नीमा पाइने केही ब्या’क्टेरियाहरु दहीमा समेत पाइन्छन् ।-गु’प्तांगको रौँ को औषत आयु भनेको जम्मा ३ हप्ता हो । जबकी टाउकोको रौँ को आयु अधिकतम ७ वर्षसम्म हुन्छ ।-यो’नीको ग’न्धलाई महिलाको भोजनको प्रकारले प्र’भाव पार्छ । त्यसैले स’हवासको अघि लसुनको सेवन न’गर्नु राम्रो हुन्छ ।